I-Mobile German Floating Words Game For Funny Mobile
Umdlalo weselula waseJalimane weselula .. ngomehluko we-almancax…
Umsebenzisi ubona igama elilodwa kanye nezicucu ze-2 ezihambelana nezitayela. Uma impendulo efanele iyizwi elingakwesokunxele, umsebenzisi ucindezela ukhiye we-LEFT wefoni ephathekayo. Uma ngabe enye inketho ilungile, umsebenzisi ucindezela ukhiye we-RIGHT. Amaphuzu athola izimpendulo ezifanele.
Ingafakwa kuwo wonke amafoni omakhalekhukhwini axhasa izinhlelo zokusebenza ze-Java, akhululekile mahhala.
Le sevisi inikezwa ngu-Germanerman kanye nomthuthukisi we-Java, i-Murat Inan.
Umdlalo wamazwi waseJalimane wesiTurkey ulula kakhulu futhi awusizo.
Ifoni yakho inokusekelwa kwe-java kanye nekhono lokungeza umdlalo wangaphandle.
Ngale ndlela ungalanda ifayela oyilandile ku-archive bese ulilayisha kufolda yakho yefoni yeselula.
Sifisela impumelelo kuwe njengeqembu laseJalimane.
Chofoza lapha ukulanda uhlelo / ifayela
Qaphela: Lolu hlelo lusatshalaliswa mahhala yi-almancax. Ngokulanda uhlelo
Uzoba nokusetshenziswa kwamahhala nokungenamkhawulo kwesokudla. Ngoba usebenzisa lolu hlelo, akukho ukwehla kwesikweletu kusuka kulayini wakho noma ukwanda kwemali oyikhokhayo.
IsiGrazil sokuBhala nokuThola umdlalo
I-KPDS 2009 Mayimi Imibuzo Nezimpendulo ZesiJalimane
I-Zertifikat Deutsch Ibhuku Lokuzivocavoca namafayela Womsindo
Amafayela wokulungiselela ukuhlolwa kweGoethe-Zertifikat C1
I-Goethe-Zertifikat I-A2: Qala Amafayela Wokulungiselela we-2
Izindaba ze-German Audio
Umdlalo wesiGerman wokuBhala
Ama-German B2 Exam Ukulungiselela Amafayela